7 Sakafo tsara indrindra Tours To Experience In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Sakafo tsara indrindra Tours To Experience In Eoropa
Mandehana amin'ny traikefa nahafinaritra mba hahafinaritra ny tsimon'ny tsiro sy handray anjara amin'ny sakafo tsara indrindra fitsidihana any Eoropa. Raha toa ianao nazoto foodie, ny lanilaniny, ary koa ny Instagram fahana dia nitsambikina fifaliana sy izay ho hiaina. Mazava ho azy, ny fomba tsara indrindra hitsidihana tanàna malaza ratsy genius ao Eropa dia lamasinina. Ireto ny tamponay indrindra 7 Sakafo tsara indrindra Tours To Experience In Eoropa.
1. Food Tours To Experience In Eoropa: Avy Baguettes To Bistro In Paris, Frantsa
Raha misy tanàna iray izay afaka mandondòna ny ba kiraro eny amin'ny culinary famoronana, Izany dia midika hoe Paris ka dia, noho izany, voalohany ao amin'ny lisitra ny sakafo tsara indrindra fitsidihana any Eoropa. Vokatr'izany, sakafo maro fitsidihana izay mihazakazaka eo amin'ny tany Paris aleo hatao hoe sakafo educations satria Feno tantara. Fomban-drazana no nandeha teo nandritra ny taonjato maro.
Aoka aingam-panahy Paris izay ahitana fitambaran filan'ny nofo.
Ny zavatra rehetra dia miafina avy amin'ny fototry ny mofo sy fromazy ny sakafo malaza, Foie Gras ary koa namboarina rillettes sy Armagnac. Ankoatry ny, dia afaka ihany koa ny revel ao Paris Cafe kolontsaina.
Rivotra ny lalanao amin'ny alalan'ny lafiny arabe sy ny tenanao velively mampitolagaga ny fomba maro Chic trano fisakafoanana, trano fisotroana kafe, Hena, ary boulangeries misy. Vokatr'izany, ho hitan'ny olona ianao amin'ny fampifangaroana tanteraka ny fomba fahandro taloha sy ny vaovao ary ny fironana amin'ny sehatry ny sakafo.
2. Food fampisehoana: Amsterdam, The Netherlands
Raha te-hahita lafiny hafa Amsterdam sy ny foodie sehatra, hijery ny tokotany sy ny arabe indray ny Jordaan District. Vokatr'izany, dia ho hitanao tsara ny sakafo purveyors te hizara ny zavatra noforoniny ary koa ny manome ny sasany hahatakatra ny manan-karena amin'ny tanàna Indoneziana culinary lova.
Manoro hevitra anareo izahay miezaka ny paoma henan'omby amin'ny malaza 400 taona Cafe, Cafe Papeneiland. Azonao atao koa ny miezaka nifoka saosisy vita avy amin'ny fianakaviana efa taonjato-mianatra ny fomba fahandro sy ny fomba holandey hihinana Herring.
3. Ny Art Of Craft Beer & Food In Prague, Repoblika Tcheky
Raha tsapanao fa mitady any Prague, hanao ny hipsters hatao sy mankafy ny asa tanana labiera ary koa ny tsenan-tsakafo fitetezam-paritra. Azonao atao mihitsy aza maka ny fitetezam-paritra amin'ny labiera manam-pahaizana. Ho faly izy ireo ny hitondra anareo amin'ny Pivo (labiera) dia tsy tahaka hafa.
mazava ho, asa tanana foana labiera azon'ny mihinana vitsivitsy ny sombintsombin-javatra eo an-toerana safidy. Ankoatry ny, aryêtre afaka manandrana atody Scotch na Czech dumplings amin'ny braised hen'omby ny anarana fa vitsy ny foodie rakitry ny Prague. Tena voafaritra ho an'ny lisitry ny sakafo tsara indrindra fitsidihana any Eoropa.
4. Food Tours To Experience In Eoropa: Age-Old hadita In Madrid, Espaina
Fa ny bonafide foodie traikefa nahafinaritra, Madrid tsy handiso fanantenana! Meander amin'ny alalan'ny Madrid sy mivory mpivarotra eo an-toerana sy ny restaurateurs. Andramo ny divay eo an-toerana ary ny fromazy manan-tantara mahafinaritra ao amin'ny Anton Martin Market. Asaivo sasany, arguably, ny tsara indrindra eo amin'izao tontolo izao cheesecakes, ny sasany izay voaendy amin'ny zato taona fatana fandoroana.
5. Ankasitrahana The City From An Insiders Perspective: Venice, Italia
Boky ny fitetezam-paritra raha tsy te-ho Nihazakazaka any Venice. Boky miaraka amin'ny olona iray izay mahafantatra ny ins sy outs tao an-tanàna sy ny fomba tsy mety ny vahoaka ary aoka hitanao ny sasany harena miafina. Ohatra, maka gondola mitaingina manerana ny lakandrano iray paty trano fisakafoanana sy misotro iray vera eo anatrehanao prosecco jereo trano fisotroana divay malaza sasany, malaza amin'ny Casanova eo an-toerana ny.
6. Food Tours To Experience In Eoropa: The International Food Scene In Berlin, Alemaina
Berlin ny sakafo toe-javatra marina amin'ny fironana sy ny volamena sakafo iraisam-pirenena, ary vokatr'izany, io no toerana tsara indrindra ahazoana namana rehefa mpivarotra sakafo ianao. Tsy misy ny olona mitondra tena toy ny sakafo miaraka no.
Tsy fahazoan-dalana mankany fa mandinika ny fitetezam-paritra amin'ny sakafo manokana eo an-toerana izay afaka hamoritra ny tanany, ary amboary ny tenanao fety nentim-paharazana, Berlin-fomba.
Raha tsy te-hanao ny zava-drehetra ny tenanao:
Zahao ny tsenan'ny Tiorka Kreuzberg na mijanona (na telo) amin'ny trano fisotroana kafe isan-karazany sy ny mpivaro-mofo.
7. Tsofina marina Foodie Experience: Vienna, Aotrisy
Vienna no hatsarany rehetra, Na izany aza izany indrindra koa no rehefa tonga ny tiany. Izany dia Tsapa maha-azo itokiana sy ny tokony hanomboka amin'ny fitsidihana ny trano kafe mahazatra Viennese. Avy amin'ny kafe trano, dia afaka hahatonga ny lalana ho any amin'ny malaza Naschmarket, nentim-paharazana amin'ny vatosoa isan-karazany ny Aotrisy specialties izay ahitana ny fromazy sy vinaingitra.
Raha tsy mihinana ny saosisy ary avy eo maka sary izany amin'ny gram ianao, rehefa ao Wurstelstand, ianao no dia any? 🌭But for tena, manana ny saosisy mahavariana indrindra izy ireo! Sasao izany any amin'ny misy Aotrisy divay amin'ny lakaly iray manan-tantara sy ny Maty E eny tsara niaraka tamin'ny delish tsindrin-tsakafo amin'ny alalan'ny fitsidihana ny sôkôla lehibe fivarotana. 🍫
Food Tours To Experience In Eoropa: Famaranana
Ny sakafo tsara indrindra fitsidihana any Eoropa dia natao fotsiny mitsoka ny sainao sy ny lanilany. Tsy misy tsy fahampiana ny safidy.
Na aiza na aiza alehanao, mijery ny alalan 'ny lisitra ny Tours fitoriana tsara indrindra izay te-anao.
Fidio izay tianao traikefa ary ny fampiasana Save A Train noho ny fiaran-dalamby Travel zavatra ilaina.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “7 Sakafo tsara indrindra Tours To Experience In Eoropa ” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-tours-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Tendan-kanina FoodScene FoodTour Instagram TrainsInEurope Train Travel